खानेपानीमै कोटा प्रणाली ! | NepalDut
खानेपानीमै कोटा प्रणाली !
नेपालदूत , डडेलधुरा
‘कोटेलीको दलित बस्ती सुनकोट’ नाम सुन्दर छ । तर सो गाउँको कथा कुरुप छ । यो गाउँ नवदुर्गा गाउँपालिका–१ मा पर्छ । गाउँमा दलित समुदाय छ । सबैका घरमा निलो रङको ‘जर्किन’ छन् । जर्किन भारतबाट किनेर ल्याएका हुन् । उनीहरू कथा जर्किनबाटै शुरु हुन्छ ।
बिहीबार दिँउसो ४ बजे । सधैँजसो घरघरबाट महिला निलो जर्किन लिएर हतारहतार गाउँमाथिको खानेपानी ट्याङ्कीमा पुगे । ट्याङ्कीमा भीड लाग्यो । भीडमा थिइन् ५० वर्षीया हरूदेवी भुल । “पानीका दुःखले यो इन्डियाबाट किनेर ल्याया हौँ”, उनले डोटेलीमा जर्किन र गाउँको कथा सुनाउन थालिन, “सबैका घरका मान्छे कोही न कोही भारतमा छन्, सबैले घर आउँदा जर्किन पनि ल्याएर आउँछन् । कसै–कसैको घरमा त ५÷६ वटा जर्किन छन् ।”
दिनमा ५० लिटर पानीमात्र भर्न पाइन्छ
गाँउभन्दा धैरै टाढा असुर्पाबाट यस ट्याङ्कीमा पानी आउँछ । दिनभरि ट्याङ्कीमा पानी भरिन्छ अपराह्नतिर धारा खोलिन्छ । हरूदेवी भन्छिन्, “हामी सबैलाई दिनको ५० लिटर अट्ने एक जर्किन पानी पाइन्छ ।”
दिनको ५० लिटर मात्र पानी पाएपछि उनीहरूलाई त्यो पर्याप्त हुँदैन । गाउँभन्दा आधा किलोमिटर हिँडेर पल्लो गाउँमा पानी लिन जानुपर्छ । उनीहरूको यो दैनिकी हो । मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने उनीहरू बिहानै ४ बजे जर्किन लिएर निस्किन्छन् । “बिहानै उठेर पानी भर्न जानुपर्छ, जान एक र आउन एक घण्टा लाग्ने हुँदा कामको हर्जा नै हुन्छ । नजिकै रहेका केटाकेटी देखाउँदै इन्दिरादेवी भुल भन्छिन्, “यिनीहरू सबै जान्छन्, ५० लिटर त्यहाँबाट बोकेर ल्याउँछन् ।”
स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष भयो । तर, सुनकोटवासीको खानेपानीको समस्या अझै सुल्झिएको छैन । “पहिलेको भन्दा त अलि सहज भएको छ । पहिले टाढबाट पानी ल्याउनुपथ्र्याे”, हरूदेवी भन्छिन्, “म बिहे गरेर आउँनुभन्दा पहिले पनि यता यस्तै समस्या थियो, आधा उमेर भइसक्यो, अझ पनि उस्तै छ ।” गाँउमै खानेपानीको ट्याङ्की त बनेको छ तर यो पानी पर्याप्त छैन ।
पानीका लागि हत्या भएको ठाउँ
खानेपानीको विषयमा विवाद हुँदा खुकुरी प्रहार गरी कोटेलीमै विसं २०७३ फागुन १ गते आइतबार एक जनाको हत्या भएको थियो । नवदुर्गा गाउँपालिकाको कोटेलीका शेरबहादुर साउदको स्थानीय भीमबहादुर भुलले खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका अनुसार स्थानीय भुल र मृतक साउदको खानेपानीको विषयमा बिहानपख विवाद भएपछि दुवैको बीचमा कुटाकुट भएको थियो । सोही क्रममा भुलले साउदमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए । भुल र साउद छिमेकी थिए । साउदको घरमाथि र भुलको घर तल थियो । दुई परिवारको खानेपानी प्रयोग गर्ने धाराको पाइप एउटै भएकाले तलको धारा बन्द भएपछि मात्रै माथिल्लो धारामा पानी जान्थ्यो । तलको धारा बन्द नगरेपछि विवाद उत्पन्न हँुदा घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । तर, घटना भएको तीन वर्ष पुग्दासमेत यहाँको खानेपानीको समस्या उस्तै छ ।
डिपबोरिङका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको र गाउँपालिकाले त्यसका लागि रु १६ लाख बजेट छुट्याएको उनले बताए । “अझै कोटेलीको २÷३ बस्तीमा खानेपानीका योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको नवदुर्गा गाउँपालिका–१ वडाध्यक्ष भीमबहादुर बोहराले बताए । गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्था गरेको र आगामी दिनमा पनि हाम्रो खानेपानी योजनामा बढीभन्दा बढी जोड हुन्छ ।